टन्सिलको लक्षण र बच्ने उपाय
घाँटिको भित्र पट्टीको भागमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुनुलाई टन्सिल भनिन्छ । मौसम बदलिनाले टन्सिलको समस्या देखा पर्छ । सामान्यतया चिसो मौसममा धेरै मानिसहरुलाई यो समस्याले सताएको हुन्छ । यसबाट बच्नको लागि हामीले यसको लक्षण र यसको उपचारको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।
​सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा आउने
नेपालगञ्ज । बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट बहिरङ्ग उपचार सेवा माघदेखि शुरु हुने भएको छ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको अस्पतालले यसअघि केही दिनका लागि स्याटेलाइट प्रणालीबाट बहिरङ्ग सेवा शुरु गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन।
अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी....
दाँत पहेलो छ ? यसरी चम्काउनुहोस्
पहेलो दाँत हुनु हिजो आज धेरैको समस्या भएको छ । सहि तरिकाले दाँतको हेरचाह नगर्नु, पराग, सुर्ती सेवन गर्नाले दाँत पहेलो हुन्छ । दाँत पहेलो हुँदा अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउने मात्र होइन, धेरैको आत्मा बिश्वाश पनि घटेको देखिएको छ । त्यसैले दाँत सेतो र चम्कीलो....
​घाँटीमा इन्फेक्सन भएमा के गर्ने ?
चिसोका कारण घाँटीमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यो समस्या हामीमध्ये धेरैले भोगिरहेको समस्या हो । घाँटी किन दुख्छ ? यसको अनेक कारण हुन्छ । जस्तैः
– गलामा टन्सिल हुँदा
– कुनै ब्याक्टेरिया वा भाइरसको कारण इन्फेक्सन
– कब्जियतको कारण
कस्ता व्यक्तिले खानुहुँदैन तितेकरेला ?
करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैनः
पायल्सः पायल्सको समस्या छ भने पनि तितेकरेलाबाट टाढै रहनुहोस् । किनकि, तितेकरेलाको प्रयोगले पायल्सको समस्यालाई थप बल्झाउन....
स्वस्थ तन र मनका लागि मीठो र गहिरो निद्रा अपरिहार्य मानिन्छ । पर्याप्त निदाइएन भने डायबेटिज, डिप्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै वजन बढ्ने समस्या देखापर्न सक्छ । त्यसैले मीठो निद्राका लागि यसो गर्नुहोस् :
निद्रा नपर्नुको कारण असुविधाजनक ओछ्यान पनि हुन सक्छ । असुविधाजनक ओछ्यानले....
​यसकारण पिउनुहोस् गोलभेंडाको जुस
गोलभेंडामा पोटेसियम, भिटामिन सी र लाइकोपिन पर्याप्त मात्रामा पाइनुका साथै कोलेस्ट्रोल....
​जाडोमा उच्च रक्तचापको जोखिम, कसरी बच्ने ?
विश्वको जनसंख्याको करिब एकचौथाइभन्दा बढी वयस्क मानिस नै उच्च रक्तचापबाट ग्रसित छन् । सबैभन्दा बढी ७०–८० वर्ष उमेर समूहका मानिसमा उच्च रक्तचापको जोखिम बढि हुन्छ ।
विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार ११ डिग्री सेल्सियसको वातावरणमा ५ मिनेट रहँदा रक्तचापमा उल्लेख्य परिवर्तन आउँछ र उच्च रक्तचाप, मुटु....
​यसकारण खानुहोस् सुन्तला
चिसो मौसममा दिउँसो घाम ताप्दै सुन्तला खानुको आनन्द तपाईंहरु धेरैले लिनु भएको होला । सुन्तला खाँदा जति मिठो र रसिलो हुन्छ, त्यति नै पोषक तत्वका हिसाबले पनि फाइदाजनक छ ।
विभिन्न भिटामिन, खनिज पदार्थ र फाइबरले युक्त सुन्तलालाई स्वास्थ्यका लागि उपयोगी फल मान्न सकिन्छ....